Wararka Dibadda – Page 12 – Shabakadda Amiirnuur
Machad laga leeyahay dalka Maraykanka, islamarkaana sameeya diraasaad iyo baaritaanno la xiriira shacabka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in malaayiin ruux oo Ameericaan ah ay ku noolyihiin xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah. Wuxuu machadkan oo lagu magacaabo Urban Institute hoosta ka xariiqay in kudhawaad kala bar shacabka […]
Dagaal xoogan oo aad u culus, waxna la isku reeban ayaa dhexmaray ciidamo katirsan Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan iyo kuwa Maraykanka ee duulaanka ku jooga wadankaas. Aroornimadii hore ee saaka ayaa ciidamo katirsan kuwa Maraykanka oo ay wehlinayaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee malleeshiyaadka Xukuumadda Kaabul waxay duulaan […]
Xukuumadda Cabdi-Rabbi oo Imaaraatka ka codsatay iney xirto Xabsiyada ay ku leedahay Yaman.
Xilli ay si toos ah usoo shaac baxeen xabsiyada sumcada xun ee dowladda Imaaraatka uga furan dalka Yaman ayay xukuumadda taagta daran ee wadankaas waxay ka codsatay Imaaraatka in gebi ahaanba ay xirto xabsiyadaas. Kulan dhexmaray wasiirka arimaha gudaha ee xukuumadda Yaman Axmed Al-meysari iyo wasiiru-dowlaha iskaashiga caalamiga ee Imaaraatka […]
Madaxweynaha dalka Eratariya Isaias Afewerki, ayaa goor sii horeysay ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Itoobiya. Tallaabadan ayaa waxa Eratariya ku kallifay kadib markii ay aragtay laba qodob oo meesha ka saaray shakigii ay ka qabtay Itoobiya. Waa midka kowaade, Itoobiya ayaa ka tanasushay dhul ay […]
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa soo bandhigtay aqoonsiga gaarka ah ee sarkaal katirsanaa ciidamada Kummaandooska oo maalin ka hor looga dilay Soomaaliya. Meydka sarkaalka iy afar askari oo dhaawac ah ayaa lageeyay qeybta caafimaadka safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi dalka Kenya. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in askariga ladilay lagu […]
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Pakistaan oo ku dhaawacmay Isku day dil oo lagu doonayay.
Dalka Pakistaan ee dhaca qaaradda ASIA ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in wasiirka arimaha gudaha ee xukuumadda wadankaas uu ka badbaaday isku day dil oo lagu doonayay. Axsan Iqbaal oo ah wasiirka arimaha gudaha ee Pakistaan ayaa isagoo ku sugan gobolka Bunjaab, waxaa rasaas ooda uga qaaday rag aan […]
Dowladda Yeman oo qorsheyneysa iney Qaramada midoobay u gudbiso dacwo ka dhan ah Imaaraadka.
Dowladda Yeman ayaa waxay qorsheeneysaa iney Qaramada midoobay u gudbiso dacwad ka dhan ah dhiggeeda Imaaraadka carabta, kadib markii uu sii baahay khilaafkii u dhaxeeyay. Mas’uul sare oo katirsan dowladda Yemna, lana hadlay wakaaladda warar “AP” ayaa shaaca ka qaaday iney diraaseynayaan iney warqad dacwo ah u qoraan Qaramada Midoobay, […]